Angovo onja - havaozina maintso | Fanavaozana maintso
La angovo onja, fantatra koa eo ambanin'ny antokom-pinoana angovo onja, dia karazana angovo mekanika azon'ny fihetsiky ny onja ary noho izany dia miresaka angovo azo havaozina isika. Mba hanovana ny angovo mekanika ho angovo elektrika dia ilaina izany mahafeno andiana fepetra takiana amin'ny haitao ara-jeolojika ary koa manana toerana mifototra amin'ny fitsangantsanganana, fitaovana finday voatonona, kodiarana na tanky izay, miankina amin'ny fahasarotiny, dia maharitra fotoana maharitra hahazoana tombony.
ny Daniel Palomino hace 4 taona .
Ny onjan-dranomasina dia misy angovo be dia be avy amin'ny rivotra, ka ny ambonin'ny ...
Miteraka angovo azo havaozina koa ny angovo an-dranomasina
ny Tomas Bigorda hace 4 taona .
Raha ny marina dia manana tanjaka lehibe hamokatra angovo ny ranomasina. Mampalahelo fa tsy araraotin'i ...
ny Daniel Palomino hace 5 taona .
Ny tetikasa WaveStar dia hanome angovo onja, izany hoe angovo ateraky ny fihetsiky ny onja (raha mila bebe kokoa ianao ...
Samy avy amin'ny ranomasina ny angovo roa, fa fantatrao ve hoe avy aiza ny angovo sy ny angovo avy any an-dranomasina? Ny tena marina dia ...
ny Nuria hace 11 taona .
Ny herin'ny onja hiteraka angovo
ny Adriana hace 11 taona .
Ny hetsiky ny onjan-dranomasina amin'ny heriny dia manana tanjaka lehibe hamokarana herinaratra avy amin'ity loharano ity.